मंगल ग्रहमा नासाको स्पेशक्राप्ट - Sindhuli Saugat
मंगल ग्रहमा नासाको स्पेशक्राप्ट
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ मंसिर ११ गते मंगलवार काठमाडौं
नासाले मंगल ग्रहको आफ्नो अभियानमा ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । छ महिनाको यात्रा तय गरेर नासाको इंसाइट स्पेशक्राष्टले सोमबार बिहान करिब २ बजे मंगल ग्रहको जमीनमा टेकेको छ । उक्त स्पेसक्राप्टटले मंगल ग्रहको जमिन र आन्तरिक भागको अध्ययन गर्नेछ । इन्साइटको सफलतापूर्वक ल्याण्डिङपछि वैज्ञानिकहरुमा खुशीको लहर देखिएको छ ।
स्पेसक्राप्टले ल्याण्डिङ गरेपछि सेल्फी फोटोग्राफ पनि पठाइसकेको छ । उक्त स्पेसक्राप्ट अर्थात् इन्टेरियर एक्सलप्लोरेन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेन, जियोड्सी एंड हीट ट्रांसपोर्ट अमेरिकाको मंगल ग्रहको यो २१ औँ अभियान हो । इन्साइटको मार्सको यात्रामा ३०२१२२३९८१ माइल को दुरी तय गरेको थियो जसमा अधिकतम र तार छ हजार दुई सय माइल प्रति घण्टा थियो । आगामि दुई वर्षसम्म उक्त स्पेसक्राप्ट मंगल ग्रहको अध्ययन गर्नेछ ।
मंगल ग्रहमा के गर्नेछ स्पेसक्राप्टले ?
नासाको यो मिशनको मद्धतले मंगल ग्रहको सतहको बारेमा धेरै जानकारी हासिल हुन सक्छ । त्यसैगरि, मंगल ग्रहको सोलर सिस्टमको जानकारीकालागि पनि उक्त स्पेसक्राप्ट प्रभावकारी हुने देखिन्छ । स्पेसक्राप्टमा जडित आधुनिक यन्त्रको मद्धतले मंगल ग्रह कसरी पृथ्वी ग्रह जस्तो भयो लगायतका विषयमा जानकारी मिल्नेछ । मंगल ग्रहको तापमानका बारेमा पनि उक्त मिशनलबाट जानकारी मिल्नेछ ।
कसरी ल्याण्ड भयो ?
मंगल ग्रहमा स्पेश मिनको सफलतालाई हेर्ने हो भने अझैसम्म ४० प्रतित मिशन मात्र सफल भएको छ । मंगल ग्रहमा ल्याण्ड गर्न वैज्ञानिकको लागि मुश्किल काम हो । इन्साइटका वैज्ञानिक ब्रुस बेनरेड्टका अनुसार हरेक चोटीको प्रयासमा गलत हुने संभावना अत्याधिक हुनेगर्दछ । ३०० मिलियन माइलको दुरी तय गर्न इन्साइट ६ मिनेटमा मंगल ग्रहमा सफलतापूर्वक ल्याण्ड भएको थियो । बैनर्टका अनुसार इन्साइट एउटा टाइम मेशिन हो, जस्ले ४.५ अर्व साल पहिले मंगल, पृथ्वी र चन्द्रमा जस्तो पथरी ग्रह कसरी बनेको पत्ता लगाउन मद्धत गर्दछ ।
किन छ खास ?
नासाको यस स्पेसक्राप्टमा अत्याधुनिक यन्त्र लागेकको छ जस्ले मंगल ग्रहका सबै जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लाे - ८ करोड खर्चेर ओलीको तस्बिर पत्रिकादेखि पोलसम्म
अघिल्लाे - सिन्धुलीको जुनार– यात्रुको मुख्य कोसेली बन्दै